यातायातपछि तोडियो वैदेशिक रोजगारको सिन्डिकेट पनि,सरकारको निर्णय नटेर्नेलाई सिधै सार्वजनिक मुद्दा !::सुनौलो न्यूज
यातायातपछि तोडियो वैदेशिक रोजगारको सिन्डिकेट पनि,सरकारको निर्णय नटेर्नेलाई सिधै सार्वजनिक मुद्दा !
बिहिबार, जेष्ठ ३, २०७५
काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहँदै आएको सिन्डिकेट तोड्ने घोषणा गरेको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले बिहिबार विशेष पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सो घोषणा गरेका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विष्टले मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि लगाउँदै आएको अतिरिक्त शुल्क नेपालको तर्फबाट खारेज गर्ने जानकारी दिए । यद्यपि‚ मलेसियाको सरकारले नै मलेसिया आउने विभिन्न देशका कामदारमाथि यो शुल्क लगाउँदै आएको छ ।
त्यस्तै‚ रोजगारीमा जाने कामदारहरुसँग भिषा र स्वास्थ्य परिक्षण शुल्क लिन पाउने निर्णय गरिएको मन्त्री विष्टले जानकारी दिए । माइग्राम‚ वान स्टेप सेन्टर‚ वान स्टेप सेन्टर‚ आइएसी लगायत शुल्न नतिर्न सरकारले निर्णय गरेको छ ।
नेपालको कानुनले तोकिए भन्दा गैरकानुनीरुपमा रकम संकलन र असुली हुदैँ आएकोमा मा त्यसलाई रोक्न उक्त कदम चालिएको बुझिएको छ । रोजगारदाता र नेपाल सरकारको सम्झौताभन्दा बाहिरको कामदारमाथि भइरहेको आर्थिक शोषण अन्त्य गरेरै छाड्ने मन्त्री विष्टले प्रतिवद्वता व्यक्त गरे। अहिले मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न नामका संस्थाले सिन्डीकेट गरी कामदारमाथि १७ हजार ४ सय रुपैयाँको आर्थिक भार थपिरहेका छन्।
मलेसिया जाने कामदारमाथि बायोमेटिक स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा ३९ वटा मेडिकल सेन्टरले सिन्डीकेट गरिएका छन्। उनीहरुले स्वास्थ्य परीक्षण वापत ४५०० रुपैयाँ असुली गरिरहेका छन्। भिएलएन र वएचसीका नाममा राहदानी संकलन‚ अनलाइन प्रणाली र भिसा प्रोसेसका नाममा ६७०० रुपैयाँ असुली भइरहेको छ।
त्यस्तै माइग्रामका नामा ३२००‚ सेक्युरिटी क्लिरेन्सका नाममा ३००० हजार रुपैयाँ असुली रोक्न र त्यस्ता संस्था खारेजीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कुतनीतिक पहल गर्दै खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्री विष्टले निर्णय गरेका हुन्।
गृहमन्त्री थापाले कारवाही गर्न दिएको निर्देशनको अवज्ञा, कारवाही रोक्न अर्का मन्त्रीको दबाब
गोरेसंगको ६ पृष्ठ लामो बयानले थप रहस्य खुल्दै, के के भयो हिजो ?
अदालतमा गोरेको बयान: म ठूलो तस्कर होइन, मानवअधिकारवादीको रोहबरमा हिरासतमा बस्न पाउँ !
दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै समाज कल्याण परिषद्का निर्देशक शिवकुमार बस्नेतमाथि परेको उजुरीमाथि गृहमन्त्री...
सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्याका मुख्य अभियुक्त भनिएका चुडामणि उप्रेती गोरे सँग...
आइपिएल खेलेर नेपाल फर्किन नपाउदै सन्दीपले पाए यति ठुलो उपहार
काठमाडौं- टाटा मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले युवा क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेलाई ब्राण्ड...
तस्करीको ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्याका मुख्यअभियुक्त चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ले आफूमाथि...
दक्षिण अफ्रिकी ब्याट्सम्यान एबी डी भिलियर्सद्वारा सन्यासको घोषणा !
काठमाडौँ, दक्षिण अफ्रिकाका ब्याट्सम्यान एबी डी भिलियर्सले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका छन् ।...